राजनीति – Page3– Lokpati.com
प्रचण्ड मृत्यु अपराध सरकार केपी शर्मा ओली पक्राउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी चितवन नेपाली काँग्रेस नेकपा अमेरिका
प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाउनुभयो, राजीनामा दिनुपर्छ : डा. लोहनी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै प्रशंसा पाएका मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा (राजीनामा दिएका) को कमिशनको अडियो प्रकरण आएपछि यो सरकारको चरित्र के हो ? भन्ने कुरा…
बाँस्कोटाको अडियोमाथि सबै कोणबाट छानविन गर्नुपर्छ : देव गुरुङ
काठमाडौं, १० फागुन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले गम्भिर अवस्था ल्याएको भन्दै यसलाई दुःखद परिघट्नाको रुपमा चित्रण गरे। उनले भने, ‘सरकार र…
‘गल्ती गर्नेलाई छुट दिने पक्षमा हामी छैनौँ’
नवलपुर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गल्ती गर्ने कसैलाई पनि पार्टीले छुट नदिने बताएका छन्। प्रेस सङ्गठन नेपाल नवलपुरद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले कसैले गल्ती गरेको भए उसलाई पार्टीले…
कांग्रेसमा गुट छ, पार्टी छैनः कोइराला
राँझा। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'गुट र उपगुटमा डुबेको कांग्रेसलाई त्यसबाट बचाउन…
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकामा ४ दिनदेखि जारी आमरण अनसन तथा स्थानीयबासीको मागबारे आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेकाले माडी-१ का वडाध्यक्षलगायतले गत फागुन ७ गतेदेखि आमरण अनसन…
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सचिवालयको बैठक वालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठक भर्खरै शुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। बैठकमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)बारे बुझ्न…
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भिजन टु एक्सन’ किताब सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले शनिबार उक्त किताब विमोचन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मदिनको अबसरमा उक्त किताव…
अब कुनै पनि अवस्थामा राजतन्त्र फर्कन सक्दैन : शेखर कोइराला
बाँके, १० फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ‘गुट र उपगुटमा डुबेको कांग्रेसलाई…
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। बैठक अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बस्न लागेको हो। बैठकमा सुशासनको सवालमा पार्टीभित्र देखिएको विचलनका साथै एमसीसी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा…
अहिले सरकारमा जाने कुनै कुरा छैन : राजेन्द्र महतो
जनकपुरधाम। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारका जान नसकिने बताएका छन्। महतोले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीसहितको रिहाइ र आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता…
सर्वाेच्च अदालतकाे ठहर : अग्नि सापकोटा निर्दाेष छन्
काठमाडौं, १० माघ। गण्डकी प्रदेशसभा (सांसद) सदस्य दीपक मनाङेमाथि २ दिनको म्याद थप भएको छ। थप अनुसन्धान गर्नको लागि सांसद मनाङेमाथि म्याद थप भएको हो। नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा सांसद मनाङेलाई…
काठमाडौं, १० माघ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)विरुद्ध उजुरी दिने मिलन गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कास्की जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्ष रहेका गुरुङलाई बैंकिङ्ग कसुरको…
काठमाडौँ। सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानमा पाँच वर्ष हद म्यादको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्…
काठमाडौं। आगामी बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मौन अवधि आज रातिबाट सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, सोमबार राति १२ पछि दल तथा तिनका उम्मेदवारको मौन अवधि सुरु हुनेछ। निर्वाचन आचारसंहितामा निर्वाचनको ४८ घण्टाअघिदेखि प्रचार…
काठमाडौं। माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्न सरकार, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी,…
कर्मचारी प्रशासनका विश्वका पाँच मोडेल के–के हुन् ?
काठमाडौं। हामीकहाँ कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ। तर, विश्वका सबै मुलूकमा यो मान्यता लागू हुँदैन। विश्वमा मुलतः कर्मचारी प्रशासनका पाँच आधारभूत मोडेल छन्, तिनै मोडेलका आधारमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नीति तय हुन्छ। तर,…
आठ सह-सचिवको सरुवा, को-कँहा ?
काठमाडौं। सरकारले ८ सह-सचिवको सरुवा गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसिचव डा।रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रशासन तर्फको सहसचिव शिवराम न्यौपानेलाई श्रम…
काठमाडौं। काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले विश्श्वविद्यालयका डीन र सह–डीनलाई कार्वाही गर्न माग गरेका छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहारप्रति निन्दा गर्दै उनीहरुले डीन र सह–डीनलाई…
अब कर्मचारीको उमेर हदबन्दी कति ?
काठमाडौं, १६ पुस। निजामती कर्मचारीको अवकाश ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ। विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारिएको थियो। अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय…
७७ जना डिएसपीको सरुवा, को–कहाँ पुगे (सूचीसहित)
काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७७ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को सरुवा गरेको छ। कार्यालयले मंगलबार पौष महिनादेखिको तलब भत्तासमेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी डिएसपीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रहरी प्रधान कायालयले…
रमाना नहुने र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही
काठमाडौं, १५ पुस। प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरी प्रदेश र…
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति तयारीका काम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको र आयोगको सम्पूर्ण ध्यान अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित…
आँखा दान गर्ने कुलमान घिसिङको घोषणा
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आँखा दानको घोषणा गरेका छन्। शनिबार तिलगंगा आँखा अस्पतालमा मरणोपरान्त आँखाको नानी दान गर्नेका सम्झना र सम्मानमा गरिएको सामूहिक श्रद्धाञ्जली–सभामा उनले आँखा दान गर्ने…
विप्लप नेकपाका जनपरिषद् प्रमूख पक्राउ
बेनी, १० फागुन। नेत्रबिक्रम चन्द् (विप्लप) नेतृत्वको (नेकपा) को म्याग्दी जिल्ला जनपरिषद् प्रमूख जगेन्द्रबहादुर पुन (जगत) पक्राउ परेका छन्। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको (नेकपा) को म्याग्दी जिल्ला जनपरिषद् प्रमूख जगेन्द्रबहादुर…
सरकारको आमूल परिवर्तनको नारा लुटतन्त्रमा सीमितः कमल थापा
कैलाली। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आमुल परिवर्तनको नारा लुटतन्त्रमा सीमित भएको बताएका छन्। उनले अहिलेको देशको ठूलो चुनौती नै भ्रष्टाचार रहेको बताए। धनगढीमा शनिबार पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले भने, ‘राष्ट्रवादी…
नवलपुर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित अनुमोदन हुने बताएका छन्। नवलपुरमा पत्रकारहरुसँग अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसीलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा…
काठमाडौं । नेकपाको कार्यदललेदअमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न सुझाब दिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल…
एमसीसी पास नगर्न नेकपा कार्यदलकाे सुझाव
काठमाडौं, ९ फागुन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अध्ययन कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनका लागि दोस्रो पटक १० दिन समय पाएको कार्यदलले नेकपा अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री…
कम्युनिस्टलाई बन्दुक चाहिँदैन, सत्ताले नै सिध्याउँछ : प्रचण्ड
काठमाडौं, ९ फागुन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार भक्तपुरमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नारायणविलास जोशी समृति प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राखेका धारणाको संपादित अंश।…
प्रतिनिधिसभा बैठक: काँग्रेसले अवरोध नगर्ने सम्भावना
काठमाडौं । लगातार स्थगित हुदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण लगातार स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न विधेयक र प्रतिवेदनहरु…
काठमाडौं । एक सय दुई स्थानीय तहले नाम तथा केन्द्र परिवर्तन गरेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारलाई स्वीकार गर्नै गाह्रो हुने गरी केन्द्र तथा नाम फेर्ने प्रस्ताव परेको हो । रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका…
सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । दुई वर्ष पुगेको अवसरमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै…
काठमाडौं । प्रदेश दुईमा सत्तारुढ सांसदहरु पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा सरकारको कामप्रति नागरिक समाज मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसद खुसी देखिदैनन्। सरकारले दुई वर्ष उपलब्धीपूर्ण रहेको दावी गर्दा सरकारको दावी नै गलत भएको…
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सीआइबीमा ठगी मुद्दा दर्ता
काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठगी आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा जाहेरी दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको जाहेरी दर्ता गरेर सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो। जाहेरीमा मुछिएका…
सरकारी जग्गामा आँखा लगाए सैह्य हुँदैनः मन्त्री अर्याल
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनेलाई कुनै हालतमा पनि नछोड्ने बताएकी छिन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ (साविकको वडा नम्बर १०) अन्तर्गतको जग्गामा सरकारी बोर्ड गाडेपछि…
कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तयारीमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
दार्चुला। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने भएका छन्। दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आइतबारदेखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रमपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी क्षेत्रको…
प्रधानमन्त्री ओली गृहजिल्ला झापा जाने तयारीमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहजिल्ला झापा जानेभएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसहित प्रधानमन्त्री ओली आज झापा जान लागेका हुन्। निर्माणधीन पूर्वाधारहरूको अजुगमन तथा स्थानीय जनतासँग छलफलका लागि…
‘दुई वर्षमा जाडोका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेन’
काठमाडौं, ३ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा दुईवर्ष यता जाडोका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु नपरेको बताएका छन्। संसदमा शनिबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृतवमा सरकार बनेसँगैं कठ्याङ्रिएर र शीतलहरका कारण कोही…
प्रदेश दुईका सांसदलाई डेढ करोडको ल्यापटप
काठमाडौं । प्रदेश दुईका सांसदका लागि प्रदेश सरकारले डेढ करोडको ल्यापटप खरिद गरेको छ । प्रदेशसभालाई पेपरलेस बनाउ भन्दै प्रदेश सांसदहरूका लागि महँगो ल्यापटप खरिद गरेको हो। प्रदेश २ सरकारले १०७ सांसदसहित केही कर्मचारीहरूका लागि डेढ करोड खर्चेर…
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको भनिए पनि राष्ट्रियसभाका सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधनका कारण सम्बोधन आजको लागि…